Ezona meko ze-ipad pro zebhodi yezitshixo (2021)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona meko ilungileyo ye-iPad Pro (2021)
Eyona meko ilungileyo ye-iPad Pro (2021)
Ngo-Epreli 20, Apple ubhengeze i-M1-inikwe amandla i-2021 iPad Pro (5th gen) ngobukhulu obuqhelekileyo obu-11-intshi kunye no-12.9-intshi. Njengoko besilindele, ngokwendlela yoyilo, iipilisi ezintsha ziphantse zafana ncam nonyaka ophelileyo IPad Pro iimodeli, ngaphandle kokunyuka okuncinci kakhulu ukulungiselela iibhetri ezinkulu. Nokuba zithini, iimodeli ezintsha ze-2021 ze-Pro zisebenza namanye amatyala amadala ekhibhodi enzelwe iimodeli zangaphambili, umzekelo iApple Smart Keyboard Folio. Kodwa ukuze sikhuseleke, apha siza kugxila kwezona meko zibalaseleyo zebhodi yezitshixongokukodwayenzelwe i-2021 iPad Pro 11-intshi kunye ne-12.9-intshi.
Ukuba uyathanda ukulandela apile Umbono we M1 iPad Pro njengotshintsho lwekhompyuter, ukufumana imeko yebhodi yezitshixo kunyanzelekile. Ngokukodwa I-iPad 15 kufutshane nekona, esilindele ukuqhubela phambili i-iPad kwindawo yokutshintsha ikhompyuter.
Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, apha ngezantsi sinezona meko zebhodi yezitshixo ze-iPad Pro 2021 onokuyithenga ngoku.
I-iPad Pro 2021 (12.9-intshi) uphononongo: Ngaba i-mini-LED ibonakalisa into enkulu?
I-iPad Pro 2021 (11-intshi) uphononongo: Amandla e-M1, ukusilela kwe-iPadOS
I-iPad Pro 2021 vs iPad Air 4: Ungakanani umahluko?
I-iPadOS 15 yokujonga izandla
Ikhibhodi yomlingo ye-iPad Pro
Nangona ifana nonyaka ophelileyo kunye ne-apos; eyahlukileyo, iApple entsha kunye neapos; s Ibhodi yezobugcisa ye-iPad ikhutshelwe iM1 Pro Pro entsha. Ikhibhodi yobuGcisa ithatha inqanaba lesiseko kwizixhobo zeNtengiso ye-iPad kunye neeapos, ke ngokucacileyo imeko yekhibhodi enqwenelwa ngu-Apple ukuze ufumane olona lwazi lubalaseleyo lwe-Pro Pro.
Ikhibhodi yobuGcisa ye-iPad Pro iyakhanya kuyilo lwayo olupholileyo, ii-angles zokujonga ezinokuhlengahlengiswa, ezongezelelweyo I-USB Type-C port kwaye ikakhulu, inyani yokuba iapos ikhibhodi ebuyiselwe umva enephedi yokulandelela.
Eyona nto iphambili kuyo, ngaphandle kwexabiso, kukuba le meko yekhibhodi inzima. Ngoku ka IiRumor , Ikhibhodi yobuGcisa ye-12.9-intshi iPad Pro 2021 zii-710 gram, ngaphezulu kwe-iPad uqobo. Ukwahluka kwe-intshi ye-11 nayo inobunzima kune-11-intshi ye-iPad Pro kwi-641 gram.
Ukongeza, ikhibhodi yeMicrosoft isebenzisa izinto zangaphandle zerabha ezifana naleyo thina & apos siyibonileyo kwi-Smart Keyboard Folio, engeyiyo & ampos; eyiyo yentshatsheli yomelele kwaye eqokelela ukungcola ngokulula, ke kufuneka ulumkiso ngakumbi xa uyisebenzisa.
Phawula:Okwangoku iapile ayikhuphi i-keyboard entsha ye-Magic ye-11-intshi ye-2021 Pro Pro, kuphela i-12.9-intshi enye.
Ikhibhodi yomlingo ye-iPad Pro 12.9 ‑ intshi kwi-Apple Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 349 Thenga kwiBestBuy $ 349 Thenga kwiApple
Ibhodi yezitshixo ebalaseleyo ye-IP Pro
Eli tyala lebhodibhodi lincinci kwaye likhaphukhaphu kangangokuba linokukhohlisa ngokulula abantu ukuba bacinge ngalo kwaye alikho enye into. Kodwa eneneni ineempawu ezintle, nangona zingabuyiswanga ngasemva okanye ikhibhodi enobuchule. Kwaye ii-apos azikho njengokukhanya okuphezulu njengoko kunokuvela, malunga ne-297 gram (i-0.65 yeepawundi), kodwa zona zilula kakhulu phaya.
I-Smart Keyboard Folio ngokukodwa ayinayo i-trackpad, kodwa kuko konke ukunyaniseka, i-iPad ayizisebenzisi ncam iimpuku okanye iitrackpads okwangoku, ngoko ke iiapos azinkulu ilahleko njengokungabikho kokukhanyisa ngasemva. Kwicala elingasentla, le meko yebhodi yezitshixo inokuphinda kabini njengokuma kwePad Pro yakho, enikezela ngee-angles ezimbini zokujonga. Kwaye ukongeza kuloo, ikhibhodi yesiqingatha sayo inokujikelezwa ngasemva kwi-iPad njengesiqhelo, esikhusela ngokufanelekileyo amaqhosha.
Ndiye ndaziqhelanisa ne-Smart Keyboard Folio kunye neapos; ezona zitshixo zincinci zokuhamba ngokukhawuleza kwaye ndiyakonwabela ukuthayipha, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukukhawuleza ukuba ungcoliswe nokuba ukhuseleke kangakanani. Izinto zayo zangaphandle ezifana nerabha ziqokelela ngokulula lonke ukungcola kuwo wonke umphezulu owubeke kuwo.
Phawula:Okwangoku iapile ayikhuphi ikhibhodi entsha ye-Smart Keyboard ye-11-intshi ye-2021 iPad Pro. Nangona kunjalo, thina kunye neapos zethu sivavanye i-iPad Air 4 Smart Keyboard Folio kwi-intshi ye-11 intshi ye-2021 Pro Pro kwaye siyifumene iyahambelana.
I-Apple Smart Keyboard Folio ye-iPad Pro (isizukulwana sesi-5) i-12.9-intshi
$ 19999 Thenga kwiApple
I-Apple Smart Keyboard Folio ye-iPad Air 4 kunye ne-iPad Pro 11-intshi
$ 17999 Thenga kwiithagethi
Imeko yeLogitech Combo yokuChukumisa ikhibhodi kunye neTrackpad ye-iPad Pro
Ngokungafaniyo neApple & apos; eyazo iimeko zebhodibhodi ye-iPad, le yenziwe ludumo lweLogitech enesidima inezinto ezibonakalayo ezomeleleyo zangaphandle. Inxalenye yayo yebhodi yezitshixo inokuchaneka, ke inokujikela kwimeko yokhuseleko kunye neqhosha lokukhaba xa kufuneka.
I-Logitech Combo Touch ifaka amaqhosha omsebenzi, ine-backlight kunye ne-trackpad, kunye nokusikwa kokukhetha iPensile ye-Apple 2. Ngokuqinisekileyo yimeko enkulu ekufuneka uyiqwalasele ukuba ubeka phambili ii-angles zokujonga kunye nobunzima bokukhanya. Kungenxa yokuba eneneni, ayisiyiyeyona meko ilula yekhibhodi kwi-574 iigrem (i-1.2 yeepawundi).
Imeko yeLogitech Combo yokuChukumisa ikhibhodi kunye neTrackpad ye-iPad Pro 11-intshi / 12.9-intshi
$ 22995 Thenga kwiApple
Ndidinga ikhibhodi ye-iPad?
Lo ngumbuzo omkhulu onokuzibuza wona ngaphambi kokuba ulahle isityhwentywe semali, ngakumbi kwikhibhodi yeqela lokuqala. Uninzi lweeapps ze-iPad kunye nemidlalo ayithathi naliphi na ithuba kwiqhosha eliqhotyoshelweyo, ke ukuba unethemba lokudlala iGrand Theft Auto: iSan Andreas okanye uzulazule ngeVLC ngekhibhodi-uya kudana. Awukwazi & apos; nokuba uhambe ngescreen sasekhaya ngezitshixo zotolo ngaphandle kokwenza ukuba ungeno lufikeleleke kuqala, olungelulo ukophula isivumelwano kodwa kulungile ukwazi ukuseta okulindeleyo. Iibhodi zezitshixo ze-IP zomzimba zisetyenziswa kakuhle ikakhulu kwii -apps ezijolise ekubhaleni okanye, ukuyibeka ngokulula, naphina apho kukho intsimi yokubhaliweyo.
Ngayiphi na imeko, kufanelekile ukuba unecala lebhodibhodi ukuba wenza ii-apos; yenza imiyalezo emininzi okanye ubhale. Iibhodi ezitshixwayo ze-iPad zisebenza kakuhle ekukhangeleni i-intanethi, ukubhala imiyalezo yemidiya yoluntu, amanqaku okanye izincoko. Kwaye iimeko zebhodibhodi ziphindwe kabini njengamatyala aqhelekileyo kunye neendawo zokukhaba, ekumele zijamelane nazo, uninzi lwethu lufuna njalo.
Ngaba ujonga nje iimeko eziqhelekileyo zePad Pro ngaphandle kwekhibhodi?
Jonga eyethu Ezona meko zePad Pro (2021) ezilungileyo uluhlu.
Uyenza njani inombolo engahleliwe kwiJava
Uhlaziyo lwe & 5g
Uyidlula njani i-Samsung Galaxy Qaphela i-3 kunye ne-apos; s yengingqi
I-NVIDIA SHIELD TV yehla isezantsi-ngalo lonke ixesha leAmazon Prime Day
Ezi zivumelwano zintsha zipholile ziguqule ii-Apple Xs kunye ne-XR kwii-bargains ezifanelekileyo
Isamsung kunye neapos s yeyona tshaja ingenazingcingo: Ishaja engenazingcingo Yima 15 W uphononongo
Eyona nto ithengwayo kwibhokisi evulekileyo yokuthengisa kubandakanya ii-Apple Watch Series 4 iimodeli
I-Samsung Galaxy Buds Live kunye neBuds Plus
Ivenkile kaGoogle ngoLwesihlanu omnyama inikezela ngezaphulelo kwiPixel 4/4 XL kunye nePixel 3a / 3a XL
Sukujonga ngoku, kodwa iifayile zeflip ziyabuya